Vaovao - Fomba fanaovana Hook na buckle
Ny zavatra noforonina dia mifandraika amin'ny farango-sy-loop mampifandray faritra roa farafahakeliny, toy ny fiadiana amin'ny mpikambana eo alohan.
Background: Ny hook-and-buckle dia karazana tady, fehy, ary faritra hafa izay natao ho azo avela hampiasaina amin'ny fampiharana maro samihafa.
Ny fametahana dia ampiasaina amin'ny tadiny, fehy na mitovy aminy misy ambaratonga fanitarana isan-karazany, toy ny fampiatoana ny zaza sy ny kitapo isan-karazany.
Ny tanjon'ny famoronana ankehitriny dia ny fanolorana hook-and-buckle nohatsaraina izay azo amboarina sy vahana amin'ny tanana. Ny tanjon'ny zavatra noforonina ankehitriny dia ny manolotra tady izay tsy misy fiatraikany amin'ny mekanisma fanidiana, na amin'ny lafiny kely fotsiny, amin'ny hery avy amina tadiny na ny mitovy aminy.
Tombony iray hafa amin'ny farango araka ny famoronana ankehitriny ny fisehoan'ny farango, rehefa raikitra, mba ho toetra mifototra ary hanehoana fa mihidy mihantona ny farango.
Ny hidin-trano dia azo itokisana ihany koa ka tsy azo sokafana ny clasp raha tsy amin'ny fidirana an-tsehatra an-tsokosoko, ary rehefa ny hery manimba ny famainganana ny fitaovana raikitra dia mihetsika amin'ny làlan'ny fanidiana, ny hidiny dia namboarina hiteraka ny fametahana amin'ny alàlan'ny fastener, ny hery amin'ny clasp dia manana singa, ary noho izany ny hery dia misy fiantraikany tafiditra amin'ny clasp.
Ny asan'ny hidin-trano amin'ireo faritra roa misaraka nefa mifamatotra dia voafehy aorian'ny fitondrana ireo ampahany amin'ny toeran'ny fanidiana, amin'izay dia mahatsapa ny toetran'ny hook araka ny foronina. Ho fanampin'izany, ny laharana fanidiana dia alahatra amin'ny ampahany mamorona ny tanany.
Ny farango sy ny fehiloha araky ny famoronana dia azo ampiasaina amin'ny tanjona maro samihafa, toy ny fehikibo amin'ny harnesses sy lamosina lamba, kitapo sy ny toy izany, ho an'ny fiara mifatotra, kilalao ary kalesy zazakely azo aforitra, ary koa fitafiana sy fanatanjahantena, fehikibo Belt and fehikibo amin'ny fitaovana fialamboly.
Noho izany, ny ampahany na ny ampahany roa amin'ny fametahana dia mety ho ampahany miavaka amin'ny ampahany ampiasaina miaraka aminy. Ny fitaovana araky ny famoronana sy ny fampiharana ny fitaovana dia manana ny toetra aseho amin'ity fampiharana patanty ity.
Lag Bolts, Bolt firafitra, Bolts amin'ny kalesy, Masinina Sodina Pipe, U Bolts, Hex Bolts,